आमाले दिएको मृ’गौलाले पनि बाँच्ने आ’स गरेकी लिनालाई ल’ग्यो कोरोनाले ! – Life Nepali
आमाले दिएको मृ’गौलाले पनि बाँच्ने आ’स गरेकी लिनालाई ल’ग्यो कोरोनाले !
आमाले दिएको मृ’गौलाले पनि बाँच्ने आ’स गरेकी लिनालाई ल’ग्यो कोरोनाले ! काठमाडौं । एक चर्चित अभिनेत्री लीना आचार्यको नि’धन भएको छ । ‘हिचकी, गन्दी बात, आपके आ जाने से और मेरी हानिकारक बीवी’ जस्ता फिल्म र वेब सीरीजमा देखा परेकी अभिनेत्री लीना आचार्यको नि’धन भएको हो । लीनालाई दिल्लीको अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । जानकारी अनुसार शनिबार उनको मृ’गौला सम्बन्धी स’मस्याका कारण मृ’त्यु भएको हो । लीनाको निधनको खबर सुनेपछि फिल्म उद्योगमा शो’कको लहर छाएको छ । लीना आचार्य गएको डेढ बर्षदेखि मिर्गौला रो’गबाट पी’डित थिइन् । *** यो समाचारको पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
उनकी आमाले केही समय अघि उनको मिर्गौला दान गरेकी थिइन् । तर यसले लीनाको जीवनलाई बचाउन असक्षम भइन् । शनिवार, लीनाले अस्पतालमा अन्तिम सास लिइन् । लीनासँग काम गर्ने कलाकारहरू अझै विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । यस अघि त्यस्ता रिपोर्टहरू पनि आएका थिए कि लीना आचार्यको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण मृत्यु भयो तर पछि यो स्पष्ट भयो कि मृ’त्युको कारण मिर्गौला फेल हुनु नै रहेको थियो । घ’टना पछि लीनाको परिवार शो’कमा डुबेको छ ।
चर्चित अभिनेता रोहन मेहराले उनको इन्स्टाग्राम स्टोरीमा लीनासँग उनको तस्वीर साझा गरेका छन् । रोहनले लेखे, ‘तपाईको आत्मा शान्तिमा रहोस्, लीना म्याम, गत वर्ष, हामी यस समयमा सँगै २०२० को शूटिङ्ग गर्दै थियौं । तपाईंको धेरै याद आयो ।’ उनको मृ’त्यु हुनुभन्दा केही दिन अघि लीना आचार्यले इन्स्टाग्राममा एउटा पोष्ट लेखिन् । त्यसमा तस्वीरसँगै लेखिएको थियो, ‘त्यहाँ केही सासहरू छन् जुन मृ’त्यु लैजान सक्छ र यसले यो भन्दा बढी के लिने सक्छ ?’ अब मानिसहरूले लीनाको यो पोष्टमा धेरै टिप्पणी गरिरहेका छन् । *** यो समाचारको पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
Previous साताको पहिलो दिन, आज आइतबार पत्याउनै नसकिने गरि यस्तो भयो सुनको मुल्य !
Next मन्त्रालयले भर्खरै जारि गर्यो यस्तो सुचना, भोलिबाट ७७ जिल्लामा यस्तो हुने !
देशव्यापी १ महिना लकडाउनको घोषणा,यी क्षेत्रहरुमा लाग्ने छैन प्रतिबन्ध !